एमसीसी पास गर्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता) - NepalDut NepalDut
एमसीसी पास गर्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)
जसपाका संघिय परिषद अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन्।जनचोर्माबाट राजनितीक यात्रा शुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँशक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा रहेर राजनिती गरिरहेका छन् ।
कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनितीका दुरदर्शी, पढेका, बुझेकानेता मान्नेहरुको जमात बाक्लै थियो । तर, पछिल्लो समय माओवादीबाट छुट्टीएरछोटो समयमा नै दलवदल गरिरहेपछिधेरैले लख काट्छन्, —‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा र्पयो। उनले अस्थिर राजनिती गरे ।’
तर, भट्टराई भनेआम नागरिकको बुझाई जस्तो दलवदल नभई आफुुले बिकास, शुसाशन, समृद्धिका निम्ती खुड्किलोहरु पार गर्दै गईरहेको तर्क गरेका छन् । प्रस्तुत छ– दलवदल, सत्ता सञ्चालन, एमसीसी, चुनाबी गठबन्धनलगायत विषयमा पत्रकार अश्विन दानीले भट्टराईसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश
दल बदल होइन्, यो एउटै अभियानका रुप हुन् । जनमोर्चा र माओवादी भनेको त एउटै हो । माओवादी भूमिगत जनयुद्धको सशस्त्र तयारीका क्रममा थियो । त्यस क्रममा खुल्ला गविविधि गर्ने मोर्चा सयुक्त जनमोर्चा थियो । त्यसयता नयाँ शक्ति, समाजवादी र जनता समाजवादी भनेको नयाँ शक्ति अर्थात वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियान कै विभिन्न खुडकिला हुन् ।नयाँ शक्ति एउटा अवधारण थियो, पछि त्यसविचारसँग मिल्ने शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि जाने क्रममा थोरै फेरबल गरिएको हो ।
तर, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको जसपा पनि अन्तत फुुट्यो ।तपाईँ जुन पार्टीमा त्यही पार्टी विभाजन भईहाल्ने अबस्था देखियो । यो संयोग मात्रै हो ? कि यसका पछाडी कारणहरु पनि छन् ?
त्यो फुटेकै होइन्, विकास निर्माण क्रममा बोटविरुवमा पनि हुर्कने क्रममा ब्रोक्राहरु झर्दै अगाढि बढ्दै जान्छ । बच्चा हुर्कर्ने क्रममा दात झर्दै पलाउँदै जान्छ । त्यो फुटेको, सिद्धिएको, झरेको भन्ने होइन विकास एउटा नियम हो । त्यसले समाज विकासको क्रममा दलहरु भनेको समाजका विधमान वर्ग, समुदायका प्रतिनिधि हुन् । त्यहाँ चाँही बिभिन्न टक्रार्याउने क्रममा विजातीय शक्तिहरु अर्थात् प्रतिगमन सोच राख्ने शक्ति हुन्छन् ति चाँही एक्लिन्छन् र अग्रगामी शक्तिहरु अगाडि बढ्छन् । त्यसैले यो टुक्रिएको, फुटको भन्ने हैन, पार्टी सुदुढीकरण सबलीकरणको एउटा प्रव्रिmया हो ।
त्यो गलत कुरा हो, हामी विचारमा दृढ छौँ । त्यसको वरिपरि छौँ । एकाध मान्छे आउनेजाने कुरालाई पार्टी फुट भनेर लिनु हुँदैन् ।
तपाईँ १० बर्ष जनयुद्धमा होमिनुभयो, अहिले विगतमा क्षेत्रिय राजनीति गरेका भनिएका दलसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ । जनयद्धका तपाईँका एजेण्डा अब यस्ता पार्टीले बोक्ने बेला भएर हो कि ?तपाईँले आफुलाई करेक्सन गर्नुभएको ?
यो सरकार त जनताको अभिमतको अपमान गर्दै त्यति बेलाको एमाले माओवादीबाट बनेको नेकपा ओली नेतृत्वको क्रममा उनीहरुले जुन खालको प्रतिगमाकारी, गैरजिम्मेवारहर्कत गरे त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्रममा परास्त गरेको यो प्रकारको अन्तरिम चुनावी सरकार हो । त्यसैले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा होइन् । तर, यसलाई छिट्टै पुर्णता दिएर जान्छौँ ।
यतिबेला देशमा एमसीसीको विवदा छ । एमसीसीको बिषयमा जसपा र तपाईँको धारणा के हो ?
एमसीसी एउटा अमेरिकी सहयोगमा प्राप्त अनुदानबाट संचालित हुने विकास योजना हो । त्यसबाट अमेरिकाले हाम्रो जस्ता गरिब देशहरुको पूर्वाधार बिकासमा केही योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने सोच अन्र्तरगत अगाडि सारेको एमसीसी योजना हो । त्यसमा हामीलाई पनि औधोगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न, विद्युत प्रसारणको लागि विद्युत आयात निर्यात गर्नका लागि प्रसारण लाइनको आवश्यकता थियो र सँगसँगै सडकहरु रणनीतिक सडकहरुको चाँही स्तरउन्नती गर्नु थियो ।त्यसैले यि दुई वटामा केन्द्रित भएर करिब ६० अर्ब बराबरको जुन अनुदान सहयोग छ ।
त्यो प्राप्त हुनु नेपालकै हितको कुरा थियो । तर, त्यो निर्माण गर्ने क्रममा केही प्रक्रियागत त्रृmटिहरु भए जस्तै, हाम्रो संविधान अनुसार यसलाई अनुमोदन गर्ने आवश्यकता नै थिएन । अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखियो । त्यसबाट चाँही एउटा विवाद सुरु भयो । त्यसलाइ एउटा वार्ता संवादबाट हल गरेर यो अनुदान सहयोग ग्रहण गरेर जनु नै राष्ट्रिय हित हुनछ । यसको निम्ति दलहरु बीचमा सहमति बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
मलाई याद छ, तपाईँलेएकपटक गोरखा आएर भन्नुभाथ्यो— ‘बुढिगण्डकी जलविद्ययुत आयोजनामा ९ अर्ब घोटला भएको छ । मसँग प्रमाण छ, आवश्यक परे सार्वजनिक गर्छु ।’ तर, अहिलेसम्म गुपचुपमै राख्नुभा’छ, किन ?
पछिल्लो बजेट हेर्दा तपाईँको गृह जिल्ला गोरखामा बजेट अत्यन्तै न्यून छ । तपाईँले पहल नगर्नु भएको कि ? पहल गरे पनि नटेरेका हुन् ?
तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनितीक दल र नेताहरुलाई ब्याङ्गे गर्दै आम नागरिकहरुले ‘जुन जोगी आएनी कानै चिरेको’ भन्छन् । मतलब जुन दल अथवा जो ब्यक्ति नेतृत्वमा आएपनि जनताले परिवर्तन्को आभाष गर्न पाएनौँ भन्छन् नि ?
त्यो सत्य होइन् । हामीले संरचनात्मक कुरा हेर्नुपर्दछ । हामीले छोटो समयमै अवधिमा पनि जनताले सम्झनलायकका कामहरु गरेका छाँै । म अर्थमन्त्री छँदा, प्रधानमन्त्री छँदा गरेको कामहरु अहिले पनि जनताले प्रशंसा गछनर्् । त्यसैले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने होईन् । कुनै जोगीको कान चिरेको हुन्छ, कुनै जोगीको कान नचिरेको पनि हुन्छ । सबैलाई एउटै भन्नु हँुदैन् ।
source : newskarkhana